2001. George W. Bush zibika iMelika ihoxa kwa-Anti-Ballistic
UHarry Potter neDwala likaFilosofi iyinoveli ngowesifazane waseBrithani uJoanne Rowling, bekuyincwadi yakhe yokuqala. Le ncwadi imayelana nomfana ongumthakathi oya esikoleni semilingo futhi enze abangane abathile. Ishicilelwe ngonyaka we-1997, yalandelwa ezinye izincwadi eziningi zikaHarry Potter. Incwadi ibicatshangelwa kahle ngababuyekezi futhi yahola amatafula wezingane iminyaka eminingi. Ifilimu yenziwa ngonyaka ka-2001 yafaka uDaniel Radcliffe njengoHarry. Abanye abantu bavimbele lezi zincwadi ngoba ziyimfundiso ephakeme futhi zigqugquzela ubuthakathi nemilingo emnyama. Noma kunjalo k ...
uBruno P. Maddox ungumbhali wama-noveli kanti futhi uyintatheli yase Brithani owaziwa kakhulu ngenoveli yakhe i- My Little Blue Dress kanye nombhalo wakhe wakumagazini. Ngemva kokuphuma kwakhe e-Harvard University ngo 1992, uMaddox waqala ukusebenza ngokuhlela izincwadi e- The New York Times Book Review kanye nase The Washington Post Book World. Ngo 1996, wakhethwa ukubha ngumhlelikazi wemagazini i- Spy kwathi ezinyangeni ezimbalwa wakhushulelwa ukuba umhleli ophakeme, isikhundla asibamba kwaze kwafinyelela lapho imagazini le yavalwa khona ngo 1998. uMaddox wabhala i- My Little Blue Dress ...
Shah Rukh Khan, owaziwa nangokuthi SRK yokuqala, ungumlingisi wase-India, umenzi wefilimu, nobuntu bethelevishini. Abhekiswe kwabezindaba njenge "Baadshah of Bollywood", "King of Bollywood" no "King Khan", usevele emafilimini e-Bollywood angaphezu kuka-80, wazuza kakhulu, kubandakanya nezingu-14 Imiklomelo Yamafilimu. Uhulumeni waseNdiya umnikeze iPadma Shri, kanti uHulumeni waseFrance umnikeze i-Ordre des Arts et des Lettres kanye neLegion of Honor. UKhan unokulandela okuphambili e-Asia kanye ne-Indian diaspora emhlabeni jikelele. Mayelana nobukhulu bezithameli nemali engenayo, uchazwe nj ...
Official MySpace Page Chris Nickson," Orchestre Baobab Biography” on AllMusic Official Site: Orchestra Baobab Official Page on their label World Circuit